जिरीको ढुङ्गेमा ठेकेदारको चरम लापरबाही ! ४ बर्ष पुग्न लाग्दा सम्म पुल बन्न सकेन
जिरि, दोलखा । दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ ढुङगे खोलामा निर्माणधिन पक्की पुल निर्माणमा ठेकेदारले चरम लापरबाही गरेको पाइएको छ । ठेकेदार उक्त पुलको जग खनेर बाँकी काम बिचैमा छोडेर सम्पर्कबिहिन भएपछि निर्माणधिन पुल अलपत्रमा परेको हो । जिरीको मुख्य लिङकन बजार भन्दा करिब १ सय मिटर माथि ढुङगे खोलामा निर्माणधिन पक्की पुल झन्डै ४ बर्ष पुग्न लाग्दा सम्म पनि निर्माण कार्य सप्पन्न हुन नसकेपछि त्यहाँका स्थानीयहरु थप मर्कामा परेका छन् ।
वडा अध्यक्ष निमा साङ्गे शेर्पा भन्छन्, “पुलको काम सुरु भएको करिब ४ बर्ष पुग्न लागि सक्यो । बजेट कहाँबाट आएको हो ? बजेट कति छ ? ठेकेदार को हो ? यो पुल निर्माणमा चरम लापरबाही भएको छ । जुन विषयमा सक्दो पहल गरें तर मेरो केही सीप लागेन ।”
बर्षयाम सुरु भएसँगै खोलाको बहाब बढेपछि सवारीसाधनहरु सन्चालनमा थप समस्या भएको थियो । केही समय अघि सर्बसाधरन आवतजावत गर्ने काठेपुल नै खोलाले बगाएपछि अहिले स्थानीयको सक्रियतामा पुन नयाँ काठेपुल निर्माण गरिएको छ ।
सवारीसाधन सन्चालनमा समस्या भएपछि वडाको ५० हजार बजेट मार्फत २ वटा हेमपाईप र नगरपालिकाको पहलमा ११ ओटा ग्याभिङ जाली सहित १५ हजार प्राप्त भएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । अहिले दु:ख सु:ख काम चलाउको लागि डाइभर्सन निर्माण गरि सवारीसाधन सन्चालनमा ल्याइएको शेर्पाको भनाई छ ।
तत्काल ठेकेदार झिकाई उक्त अलपत्र निर्माणधिन पक्की पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन सबैले पहल गर्नुपर्ने ढुङ्गे टोल बिकास समितिका अध्यक्ष पदम ब. बिश्वकर्माले बताएका छन् । निर्माणधिन अलपत्र पुलका कारण कुनै पनि बेला त्याहाँका स्थानीयहरुले ठूलो समस्या भोग्नु पर्ने र अ’प्रिय घ’टना हुनसक्ने स्थानीय दोर्जी शेर्पाको भनाई छ ।